के प्रदीप र जसिता पुनः एकसाथ पर्दामा देखिदैछन् त ? « News24 : Premium News Channel
के प्रदीप र जसिता पुनः एकसाथ पर्दामा देखिदैछन् त ?
काठमाडौं । उज्वल घिमिरेले निर्देशन गर्ने फिल्ममा अभिनेता प्रदीप खड्का र ‘लिलिबिली’फेम अभिनेत्री जसिता गुरुङ पुनः एक साथ पर्दामा देखिने भएका छन् । यो फिल्मको नाम ‘लभ स्टेशन’ राखिएको छ । फिल्मलाई अभिनेता प्रदिप खड्का र वितरक गोविन्द शाहीले संयुक्त रुपमा बनाउन लागेका हुन् ।
मिलन चाम्सको फिल्म ‘लिलिबिली’मा काम गरेसँगै अभिनेता प्रदिप र वितरक गोविन्द नजिकिएका थिए । त्यसोत, मिलन चाम्सको फिल्म ‘लिलिबिली’मा अभिनेता प्रदिप र जसिताको जोडीलाई दर्शकहरुले खुब मन पराएका थिए । जानकारीमा आएअनुसार अहिले यो फिल्मको धमाधम काम भईरकेको छ ।
अहिले अभिनेता प्रदीप भने फिल्म ‘रोजी’को सुटिङमा व्यस्त छन् । ‘रोजी’ फिल्मको सुटिङ सकिएलगत्तै ‘लभ स्टेशन’ फिल्म फ्लोरमा जाने बताइएको छ । यो फिल्म पूर्ण रुपमा लभस्टोरीमा कथामा बन्ने बताइएको छ ।
यसै फिल्मको लालि दुई अभिनेत्रीहरुको आवश्यकता पर्ने भएकाले ‘अभिनेत्री जसिता र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसँग कुरा भैरहेको गोबिन्द शाहीले जानकारी गराएका छन् । तर दुवैसँग फाइनल भने भएका छैनन् । यो फिल्मलाई नेपालका रमणिय ठाउँहरुका साथै अमेरिकामासमेत खिचिने बताइएको छ ।